"Okselo" - a brand abasha okhulele, onguchwepheshe ukukhiqizwa skateboard, ezinamasondo, skateboard, skates. Kwezimoto ahlukahlukene esohlwini elula ukufunda e abadala nezingane ibhekwa isithuthuthu. Kukholakala ukuthi ubonakaliswe ekhulwini XIX kuphela phelelisa ngokuhamba kwesikhathi, nakuba umklamo oyisisekelo ayikashintshi kakhulu. Umkhiqizi "Okselo" inikeza anhlobonhlobo Scooters, ngubani wakwazi ukuthola amamaki aphezulu evela kumakhasimende.
It is a brand okungukuthi ijwayelekile cishe wonke umuntu ongakabi ngonyaka "Samokatnaya" isihloko sokuqala. Izikuta "Decathlon" - ikhwalithi, ukuphepha, imoto, sinokuqiniseka ukuthembeka kanye nokuzethemba. Le nkampani inyathelisa umugqa ayo izimoto ezikhiqizwa eyinkimbinkimbi, okuyinto ngesikhathi uzinzile ngempela.
I isikuta Oxelo ( «Decathlon") umzimba ezenziwe ngensimbi kanye ne-aluminium, izingane kuphela sika onobuhle-Google Play uchungechunge zenziwa plastic okuhlala. Kuze 5 izingqimba has a emphemeni elenza amelana umthwalo amandla. Laba bobabili izinguqulo eziqondisa ababulawa: bendabuko isondo kokuphenduka futhi induku yokudlala, okuyinto basabela ukuthambekela umzimba. Wheel, kuye ngokuthi imodeli ethize, has a amazinga ehlukene ukuphakama.
Amasondo zenziwa polyurethane, iraba noma irabha, unikezwe ezinye amabombo isivinini kanye metallic akwazi ukugcina. Amasondo Abanye onobuhle nazo ifakwe vibration mfutho. Kusukela eshumini nambili, bonke Scooters abe ukubopha ibhukwana noma unyawo futhi mudguards. Idatha Scooters umthelela umthwalo ithambisa khona ukushaqeka wezinciphisi kanye nokumisa. sici ngokuyinhloko futhi ukusonga ephephile fast.
Cishe yonke imikhiqizo anemisila wayibhinca ekuthwaleni, ngenkathi imodeli entsha futhi nekambiso yeenthuthi ezithuthukisiwe. Ukuvikeleka, ukuthembeka, yizinhlobonhlobo ikhange zonke brand isithuthuthu. Intengo kwanoma iyiphi imodeli kuhambisana izinga yayo kanye nokusebenza. Kulokhu, umenzi ukhiqiza Scooters, ngentengo ezingabizi zonke amakhasimende.
Le nkampani iye zinakekelwe nezingane zabo bonke ubudala, ukudala uchungechunge push-Google Play. Kikbordy etholakalayo nabagibeli omncane engenathi - onobuhle amasondo phambi ezimbili ukuqina okukhulu. Intsha, abafundi, abafundi uphiwa ezihlukahlukene amamodeli we uchungechunge Mid. isithakazelo esiqotho iyona isithuthuthu i drift. Anakho platform eside futhi ezibanzi ezibanzi esitebeleni isilinganiso amasondo ububanzi. Izungezisa isondo elingemuva inamazinga amathathu ukulungiswa, kuncike amakhono nabagibeli abasha.
Okulandelayo uyisibonelo ezithakazelisayo izingane - 4-wheel Stunstreet, eyenzelwe eqoshwe-skiing. Scooter, naphezu khona ukungakhululeki okuthile yayo sobala zangaphandle, fast kakhulu, eyizingqabavu futhi beshesha, akakwazi ukushiya abalandeli ngabandayo ukwenza ematfuba abukhali. Kuyamangalisa nice izindleko onobuhle - I-nabagibeli omncane engenathi iqala ruble 1900. Intengo isilinganiso amabhodi eyeve eshumini nambili - ruble 3000.
Uma ucabangela Scooters nge amasondo enkulu "Decathlon", kuyafaneleka-ke uyisibonelo ukuhamba, elakhelwe izizinda eside. Ngenxa Ubukhulu bayo compact emigwaqweni matasa, ningabi isithiyo. Into elandelayo enhle lokhu model - esikhwameni bephethe wayibhinca - kuyilapho ukuhamba lubalulekile ikakhulukazi. Zonke onobuhle kulolu chungechunge anemisila amasondo ezinkulu polyurethane (170-200 mm ububanzi), ukushaqeka wezinciphisi, abanye babe ukumiswa. Ngesikhathi esifanayo ongakhetha ukuhamba lokhu brand presents lenqwaba amasampula, kanye amanani ku ezahlukene ruble 6000-13000.
Abadala Scooters kusukela "Decathlon" kubalandeli of freeride futhi freestyle luthathe indawo ekhethekile uhlelo. imodeli Trick kuba lula kakhulu ukuba baphumule, sibonga ukungabi khona ukusonga indlela, kanye nenani elincane fasteners. Lezi ukuphakama onobuhle esisezimpondweni ikakhulukazi fixed, kuyilapho amasondo ayo imahhala ukuzungeza axis awo. amasondo Aluminium, yayincane, akhiwe ngerabha noma irabha enikeza adhesion ezinhle kuwo wonke evele. Amasondo ebekelwa izinga okusezingeni amabombo weqoqo ezahlukene zokucabanga. Inqubomgomo zamanani yalezi amaqhinga onobuhle inquma izinga zabo eziphakemeyo. onobuhle Professional abiza ruble 8,000., Nakuba Wabasaqalayo freestyle Ungathenga isibonelo sokuba ruble 4000.
Esikhathini "Decathlon" Scooters for stunts ethulwa izinhlobo ezahlukene - I-Drifters eziphambili, Wabasaqalayo kanye bamazwe ebona. Ingxubevange Core uhlelo yakhelwe amakhosi freestyle - ke ihlinzeka Rebound ezinhle futhi okusezingeni eliphezulu bafake ukumelana. Made ephezulu amandla izinto. Soundboard ka anodized aluminium multilayer.
Okwamanje samanje emakethe lenqwaba zemidlalo Abenzi zonke izinhlobo zezimoto. Izikuta ka "Decathlon» Oxelo uyohlala endaweni yokugcina kuso. Izibuyekezo wabo sinake amaphuzu ezithakazelisayo lapho ekhetha imodeli lokhu brand.
maneuverability, ukugijima, ngithule;
Iletha uhambo omkhulu phezu kwezintaba Tile;
alo indlela akusho creak;
sibonga ukufakwa kwi Scooters "Decathlon" amasondo inflatable, ziba okuhlala kanye enokwethenjelwa wonke amasondo izimoto;
emphemeni ukhululekile, kukhona ithuba ukubeka zombili izinyawo, elula ukuzishintsha.
ezingemuva ukubopha izimpiko eligoqiwe Ilokhi ezingeni ayo;
ukungabi kwi front wheel mudguard kwezinye tinkhulumo;
ukubopha ngaso sonke isikhathi ngempumelelo ezingemuva ngesivinini;
lapho uhamba phezu umsindo anolaka;
models abe nesisindo esiphakeme, okuyinto engeke zokuthutha.
Inkampani Oxelo zonke ukusebenza ukuze ithuthukise umkhiqizo, esikhiqiza yonyaka omusha Scooters onobuhle. Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli iyinkampani ngamandla asathuthuka. Thina, njengoba abathengi, singaqiniseka ngokuphelele ukuthi izinkampani Scooters Oxelo ngeke esikhathini esiseduze esizayo omunye ethandwa kakhulu ezweni lethu (uma okwamanje akuzona), ne abameleli esemthethweni sha izovela yonke imizi Russia, hhayi kuphela-milionnikah emadolobheni.
Shoes ukudoba ebusika. ukhethe Izici
Uzungu ekuhlaleni ngokwehlukana. Umyalo wokuqala - singazilimazi.